News - Xieyanshi ပွန်းပဲ့ဆေးများ Comac နှင့်ပူးပေါင်း!
Xieyanshi ပလပ်စတစ် Comac နှင့်ပူးပေါင်း!
ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကြာမြင့်စွာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းပြီးနောက်ရှန်ဟိုင်း Xieyanshi ပွန်းစားခြင်းနောက်ဆုံးတော့ COMAC'S လွန် (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) သည်၎င်းတို့အားယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်လာစေရန်တိကျစွာစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးသည်။ XIEYANSHI သည်ပွန်းစားရလွယ်ကူသော A720T, B322, L911 စသည်တို့နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်
Xieyanshi ပွန်းပဲ့နေတဲ့ဥက္က္ဌ Mr Chen ကတော့ CIIE (၃ ကြိမ်မြောက် China International Import Expo) မှာ COMAC နဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်ရုံပဲ။
(မစ္စတာချန်၊ အမျိုးသမီးဘေးတွင်ပန်းရောင်ဖြင့်ထိုင်နေသည်။ )
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာလေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်း (China Aircraft Corporation of China), Ltd. (COMAC) သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ပျံအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်အဓိကယာဉ်ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းဂျက်ပရိုဂရမ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်တရုတ်နိုင်ငံရှိလေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အလုံးစုံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူပြဌာန်းထားသည်။ COMAC သည်အရပ်ဘက်လေယာဉ်များနှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များကိုသုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လေယာဉ်စမ်းသပ်ခြင်းများအပြင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊
ရှန်ဟိုင်း xieyanshi Abraisves Co. , Ltd (XYS) သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွန်းစားသောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်များကိုမော်တော်ယာဉ်၊ လေယာဉ်ပျံ၊ သစ်လုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသည်အမြဲတမ်း ဦး စားပေးဖြစ်သည်။
သင့်ထံမှမည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုသို့မဟုတ်နမူနာတောင်းဆိုမှုကိုမဆိုကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါက Pls သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။